မိုးရာသီမှာ အသားအရေ ကို ဘယျလိုထိနျးသိမျးမလဲ - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
⛈ မိုးရာသီမှာ အသားအရေ ကို ဘယျလိုထိနျးသိမျးမလဲ ⛈
အားလုံးသိတဲ့ အတိုငျးပဲ..လူမုနျးမြားနခေဲ့တဲ့ ‘နှေ’က ပွက်ခဒိနျထဲမှာတော့ ထှကျပွေးလှတျမွောကျသှားပွီပေါ့။ သူမရှိတော့ပမေဲ့ သူ့အပူတှကေိုတော့ အားလုံးယူမသှားဘဲ နဲနဲတော့ ခနျြထားခဲ့ပုံပဲ။ မိုးမရှာခြိနျတှဆေို ပူလိုကျတာ။
တိမျထူနလေို့ နရေောငျမမွငျရပမေဲ့ UV Index လို့ချေါတဲ့ ခရမျးလှနျရောငျခွညျညှနျးကိနျးတှကေတော့ မွငျ့တုနျး။
မိုးရစေကျတှဆေိုတာကလညျး အိမျထဲကနေ ကျောဖီတဈခှကျနဲ့ ထိုငျငေးနရေရငျသာ ‘မိုးလေးဖှဲတုနျးသတိရတယျ..မွငျနတေဲ့ပွတငျးတံခါးဆီပဲ’ဘာညာ ကဗြာဆနျပမေဲ့ လမျးပျေါကလူတှအေတှကျကတော့ စိတျညဈစရာ။ စိုစိုစှတျစှတျအဝတျအစားတှေ… စိုထိုငျးဆမွငျ့လာလို့ ပူစပျစပျနဲ့ တရိပျရိပျထှကျနတေဲ့ခြှေးတှေ..။
အပူရှိနျ..ခရမျးလှနျရောငျခွညျ..စိုထိုငျးဆမွငျ့မားမှု.. ရစေိုခြှေးစို အဝတျအစားတှေ.. ဒါတှအေားလုံးက အသားအရညျကနျြးမာလှပရေးအတှကျတော့ မဟာရနျသူတှပေဲပေါ့။
✔ မိုးရာသီမှာ အဖွဈမြားတဲ့ အရပွေားပွဿနာတှကေ ဘာတှလေဲ ??
ပှေး၊ ညှငျး၊ နှငျးခူ စတဲ့ ယားနာမြိုးစုံ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ အဝတျရစေိုတှကွေောငျ့ အသားယားယံတာမြိုးတှဖွေဈတတျပါတယျ။
✔ ဒီတော့ မိုးရာသီမှာ အသားအရညျမပကျြစီးအောငျ ဘယျလိုထိနျးသိမျးကွမလဲ ?
▪ တဈကိုယျရညျ သနျ့ရှငျးရေးကို အထူးဂရုပွုပါ။
လူသနျ့သလို အဝတျအစား အိပျရာခငျးနဲ့ အသုံးအဆောငျတှလေညျး သနျ့ရှငျးပါစေ။ အထူးသဖွငျ့ အတှငျးခံအဝတျအစားတှပေေါ့။
အဝတျရစေိုတှနေဲ့ အကွာကွီးမနပေါနဲ့။ ထီး မိုးကာ အမွဲဆောငျပါ။
▪ ယားနာဆိုတာ မြားသောအားဖွငျ့ကူးတတျပါတယျ။
အဝတျအစားနဲ့ တခြို့ အသုံးအဆောငျတှေ တူတူဝမြှေသုံးစှဲတာမြိုးရှောငျပါ။
သတိထားပွီး လကျကိုမကွာခဏ ဆပျပွာနှငျ့ဆေးပါ။
▪ အစားအသောကျ မမှားပါစနေဲ့။
အပူအစပျတှရှေောငျပါ။ အသီးအနှံပိုစားပါ။ အသီးအရှကျမြားမြားစားပါ။ ရမြေားမြားသောကျပါ။
▪ အရပွေားပွဿနာတှပေျေါလာရငျ ဆရာဝနျနဲ့တိုငျပငျပါ။
မှိုရောဂါတှအေတှကျ မှိုသတျဆေး လိမျးဆေးခရငျမျတှေ၊ ခေါငျးလြှျောရညျတှေ ဆပျပွာတှသေုံးလို့ရပါတယျ။ တခွား ယားနာတှအေတှကျလညျး ရောဂါပိုးအမြိုးအစားပျေါမူတညျပွီး သောကျဆေး၊ လိမျးဆေးတှေ ဆရာဝနျညှနျကွားခကျြနဲ့ အသုံးပွုလို့ ရပါတယျ။
⛈ မိုးရာသီမှာ အသားအရေ ကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ ⛈
အားလုံးသိတဲ့ အတိုင်းပဲ..လူမုန်းများနေခဲ့တဲ့ ‘နွေ’က ပြက္ခဒိန်ထဲမှာတော့ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားပြီပေါ့။ သူမရှိတော့ပေမဲ့ သူ့အပူတွေကိုတော့ အားလုံးယူမသွားဘဲ နဲနဲတော့ ချန်ထားခဲ့ပုံပဲ။ မိုးမရွာချိန်တွေဆို ပူလိုက်တာ။
တိမ်ထူနေလို့ နေရောင်မမြင်ရပေမဲ့ UV Index လို့ခေါ်တဲ့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ညွှန်းကိန်းတွေကတော့ မြင့်တုန်း။
မိုးရေစက်တွေဆိုတာကလည်း အိမ်ထဲကနေ ကော်ဖီတစ်ခွက်နဲ့ ထိုင်ငေးနေရရင်သာ ‘မိုးလေးဖွဲတုန်းသတိရတယ်..မြင်နေတဲ့ပြတင်းတံခါးဆီပဲ’ဘာညာ ကဗျာဆန်ပေမဲ့ လမ်းပေါ်ကလူတွေအတွက်ကတော့ စိတ်ညစ်စရာ။ စိုစိုစွတ်စွတ်အဝတ်အစားတွေ… စိုထိုင်းဆမြင့်လာလို့ ပူစပ်စပ်နဲ့ တရိပ်ရိပ်ထွက်နေတဲ့ချွေးတွေ..။
အပူရှိန်..ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်..စိုထိုင်းဆမြင့်မားမှု.. ရေစိုချွေးစို အဝတ်အစားတွေ.. ဒါတွေအားလုံးက အသားအရည်ကျန်းမာလှပရေးအတွက်တော့ မဟာရန်သူတွေပဲပေါ့။
✔ မိုးရာသီမှာ အဖြစ်များတဲ့ အရေပြားပြဿနာတွေက ဘာတွေလဲ ??
ပွေး၊ ညှင်း၊ နှင်းခူ စတဲ့ ယားနာမျိုးစုံ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဝတ်ရေစိုတွေကြောင့် အသားယားယံတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။
✔ ဒီတော့ မိုးရာသီမှာ အသားအရည်မပျက်စီးအောင် ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းကြမလဲ ?
▪ တစ်ကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းရေးကို အထူးဂရုပြုပါ။
လူသန့်သလို အဝတ်အစား အိပ်ရာခင်းနဲ့ အသုံးအဆောင်တွေလည်း သန့်ရှင်းပါစေ။ အထူးသဖြင့် အတွင်းခံအဝတ်အစားတွေပေါ့။
အဝတ်ရေစိုတွေနဲ့ အကြာကြီးမနေပါနဲ့။ ထီး မိုးကာ အမြဲဆောင်ပါ။
▪ ယားနာဆိုတာ များသောအားဖြင့်ကူးတတ်ပါတယ်။
အဝတ်အစားနဲ့ တချို့ အသုံးအဆောင်တွေ တူတူဝေမျှသုံးစွဲတာမျိုးရှောင်ပါ။
သတိထားပြီး လက်ကိုမကြာခဏ ဆပ်ပြာနှင့်ဆေးပါ။
▪ အစားအသောက် မမှားပါစေနဲ့။
အပူအစပ်တွေရှောင်ပါ။ အသီးအနှံပိုစားပါ။ အသီးအရွက်များများစားပါ။ ရေများများသောက်ပါ။
▪ အရေပြားပြဿနာတွေပေါ်လာရင် ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
မှိုရောဂါတွေအတွက် မှိုသတ်ဆေး လိမ်းဆေးခရင်မ်တွေ၊ ခေါင်းလျှော်ရည်တွေ ဆပ်ပြာတွေသုံးလို့ရပါတယ်။ တခြား ယားနာတွေအတွက်လည်း ရောဂါပိုးအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး သောက်ဆေး၊ လိမ်းဆေးတွေ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်နဲ့ အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။